ezaposwa ngomhla 12 / 27 / 2018 by 阿斯劳 bha liweyo Dianabol, Ithala.
Ngaba ujonge ukuphucula ubunzima bakho bemisipha, ukukhaba ukuqala okanye ukugcina iinzuzo ezinkulu? I-Dianabol (methandrostenolone) ipowder kufuneka ibe yinto yakho enkulu elandelayo. Fumana into ekufuneka uyazi malunga nezi anabolic steroids, ukusetyenziswa, ukuphumelela, nendlela yokudlulela kwimiphumo emibi.
Ukusebenza kunezibonelelo zezempilo, kodwa kufuna umonde omkhulu, ukungaguquguquki kunye nexesha. Ndiyathetha, awukwazi ukwenza umthambo kangange veki, zihlolisise kwisibuko, kwaye ulindele ukubona izihlunu ezinomlingo. Nangona kunjalo, unokwenza ngobulumko ngokuncedisa ukusebenza kwakho kunye ne-anabolic steroids evunyiweyo, ngokuqinisekileyo eya kwandisa imisipha yakho kwiintsuku ezisixhenxe.
Ngokungafaniyo nezinye i-steroids, i-Dianabol protein powder ivumelekile kumazwe amaninzi. Nangona kunjalo, ichiza yinkqubo yeshedyuli III elawulwayo kwaye iya kufumaneka kuphela kugqirha, ngakumbi e-US
I-AASraw ngumenzi wobuchwephesha be-Dianabol (Methandrostenolone) Powder,
Thetha nathi ngolwazi olungakumbi lwekoteyishini! Unxibelelwano nathi
Phakathi kowe-1940 nowama-50, abantu baseRussia babelawula iiOlimpiki, ngenxa yeemveliso ze testosterone ezazisetyenziswa ziimbaleki zabo. Nangona kunjalo, le mfihlo yayihlala ixesha elifutshane xa i-US ngelo xesha. Ugqirha weOlimpiki, uJohn Ziegler, wafumanisa iqhinga. Kwilinge lokuphuma kwiSoviet Union, wadibana neCiba Pharmaceuticals ukuza nemveliso efanayo.
I-Dianabol (methandrostenolone) ipowder yaqala ukubakho emva kweminyaka yoo-1950. Yayithandwa kakhulu phakathi kwee-1960 kunye nee-70s njengokhetho olukhethekileyo ekwakheni umzimba nge-steroids.
Umzimba · Amanzi (9.7 mg / L kuma-25 ° C)
Amagama amabhanki kunye neeRhwebo · UDianabol
Ukuthenga ii-anabolic steroids kuxhomekeke kwizinto ezimbalwa. Indawo okuyo inendima ebalulekileyo okoko amanye amazwe amise izithintelo ekuthengeni, ekufumaneni nasekusebenziseni i-Dianabol powder. Umzekelo, ukusetyenziswa kwe-methandrostenolone kunye neziphumo zayo akukho semthethweni e-US, e-Australia nase-Canada, ngaphandle kwalapho kusemthethweni. Nangona kunjalo, kwamanye amazwe afana neMexico, U-Dianabol powder uthenge Kulula nje ukuthenga iibini zetyhini.
I-D-bol ingaba yisilwanyana esipheleleyo kwimeko yakho, kodwa unokwenza ukuthengwa ngokomthetho kwilayisenisi Umenzi we powder Dianabol. Makhe ndikucacisele. Ukuba awunalo iphepha elisemthethweni elivela kugqirha, ingqondo yakho iya kucofa kwiimarike ezimnyama. Ewe, isivumelwano sinokuba sihle kakhulu sisebenzisa umnyango wangemva, kodwa kunokwenzeka ukuba uwele kumachiza omgunyathi, angenabungozi, kunye nokubulala.
Nangona kungenangqondo ukufudukela kwilizwe eligunyazisile ukusetyenziswa kwe-steroids, usengabhanki kwi-Dianabol powder online. Ubuncinci, uqinisekisiwe ngemveliso ekumgangatho ophezulu eveliswe phantsi kweemeko eziyinyumba nezilawulwayo.
Cofa kwibar yokukhangela, chwetheza “Dianabol,” kwaye ukhangele into leyo
Uya kuyalelwa ukuba ubhalise iakhawunti yokulandelela ngokulula imveliso ngexesha lokuhambisa. Nangona kunjalo, unokukhetha ukujonga njengendwendwe.
Qaphela ukuba ixabiso le-Dianabol powder lihluka ukusuka kumthengisi omnye ukuya kwelinye kunye nobungakanani obuthengayo.
Kukho ukuya kuthi ga ezintlanu kwi-Dianabol powder yokuguqula iiresiphi, ezahluka ngokwezithako ezisetyenzisiweyo kunye nedosi.
I-steroid ivuselela umdla womsebenzisi, amandla, kunye nomoya.
Kwizinto zokuzilolonga, i-Dianabol steroid yeyona nto ilungileyo yokunyusa amandla akho kwaye ikunike amandla okunyamezela ukusebenza ngamandla. Iyeza likhawulezisa ixesha lokubuyisela kwaye kwangaxeshanye kunciphisa ukudinwa.
Ukuba unesifo esisezantsi se testosterone, ugqirha wakho unokumisela i-steroids esemthethweni njengeDbol.
Imilinganiselo esemgangathweni ye-Dbol iphakathi kwe-15 kunye ne-50mg / ngosuku. Nangona kunjalo, abanye abasebenzisi abanamava baya kusebenzisa kangange-100mg ngosuku. Eyona nto iphambili ekufuneka uyiqaphele kukuba iidosi eziphezulu ze-steroids ziya kuthi zichaphazele uxinzelelo lwegazi.
I-Dbol yayingu-anabolic steroid yokuqala enokuthi ithathwe ngomlomo. Nangona ichiza lidumile kwaye lithathwa njengecwecwe, unokulisebenzisa ngenaliti ye-intramuscular. Iziphumo ezigqwesileyo, kuya kufuneka wamkele isitaki se-Dianabol ngokusebenzisa ezinye i-steroids ezinje ngeDurabolin, testosterone, Primobolan, okanye trenbolone.
Iziphumo ze-Dianabol zihlala zibonakala kwiveki yokuqala yokuyithatha. Nanku uqikelelo kubungakanani obungafumana ubunzima kumjikelezo opheleleyo;
I-Dianabol steroid iluncedo kuphela ukuba uyisebenzisa ngobulumko ngelixa ujonga izilumkiso kunye neengozi ezichaphazelekayo. Okukhona usonyusa idosi, kokukhona amathuba okuba neziphumo ebezingalindelekanga ezibi.
Jonga ukutya kwakho
Qaphela ukuba umjikelo we-Dianabol kufuneka uhlale phakathi kweeveki ezintandathu ukuya kwezisibhozo.
Uya kuqala ukuqaphela iziphumo ngokukhawuleza xa uqala idosi. Awudingi ukuthelekisa i-Dianabol ngaphambi nasemva kweefoto ukuze uqaphele umohluko. Emva kweveki yokuqala, umzimba wakho uza kubonakala ugcwele, kwaye uya kuba namava obunzima.
Ngelixa uzilolonga kwindawo yokuzivocavoca, uya kuba namandla aneleyo okwenza uqeqesho olunamandla okanye uphakamise ubunzima obunzima. Ukuphela komjikelo, uya kuba ufumene into ekufutshane ne-20lbs.
Esi sidakamizwa siphakathi kwezimbalwa steroids zomthetho ezikhuthaza ukukhula kwehomoni. Ukuba udibanisa isitaki se-Dianabol kunye nokutya okunempilo kunye nokusebenza rhoqo, i-steroid isebenza ngomlingo. Nangona ufumana ubunzima obufanelekileyo, amanqatha omzimba wakho anciphisa kakhulu.
Uninzi lwee-steroids luyathengiswa. Nangona kunjalo, i-Dianabol ilawulwa ngomlomo ngeepilisi, iipilisi, iifomsile, okanye kwifom yolwelo. Unokwenza iresiphi yakho ye-Dianabol powder kunye nokwenza idosi ngokwezifiso.
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-dbol zixinzelelo oluphezulu lwegazi, ukonakala kwesibindi, kunye ne-gynecomastia. Inyaniso yokuba isifuba sakho sigcwele ngokungummangaliso kwisithuba esingaphantsi kweveki kunokuba sisithintelo. Ungazilawula ezinye iziphumo ebezingalindelekanga ngokujonga uqeqesho lomntu kunye nokulandela umkhombandlela, kodwa i-gynecomastia ayilawuleki.